Indhahaaga kaliya, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland (WKG)
Laakiin, sida qoran, "Wixii ishu wax arag, iyo dhegola'aan iyo qalbiga dadka ku jira, wuxuu Ilaah u diyaarshay kuwa isaga jecel" (1 Korintos 2:9).
Intii aan sugayey marki la ii sugayey in indhahayga la baaro, waxay igu dhacday sida cajiibka ah ee ay indhaheennu u sameeyeen. Markii aan ka fekeray yaababka indhaha, dhowr Qorniin ayaa maskaxdayda ku soo dhacay oo furay indhahayga si aan u aqoonsado awoodda ciise ee ka dhigtay indhoolayaasha. Mucjisooyin badan ayaa Kitaabka Quduuska ah loogu duubay si aan si dhow uga fiirsan karno iyaga. Ninkii indha la'aa markuu dhashay oo Masiixu bogsiiyey ayaa yidhi: Anigu garan maayo inuu yahay dambiile; Waan ogahay inaan indha la 'ahay hadana waan arkaa " (Yooxanaa 9:25).
Dhammaanteen waan wada indha la'aahay xagga ruuxa, laakiin Ilaah waa inoo furay indhahayaga inaan runta ku ogaado Qorniinka. Haa Waxaan ahaa ruux indhala'aan markay dhasheen, laakiin hadda waxaan ku arkaa rumaysad, maxaa yeelay, Ilaah ayaa qalbigayga ku iftiimiyey. Waxaan ku arkay shaqsigayga ciise masiix sharafta Ilaah oo buuxda (2 Korintos 4: 6). Sida Muuse u arkay midka aan la arki karin (Cibraaniyada 11:27).
Waa wax aad u raaxo leh inaan ogaano in Eebbe na ilaaliyayo inuu ina badbaadiyo. Rabbiga indhihiisu waxay wareegaan dhulka oo dhan inuu isu adkeeyo kuwa qalbigoodu isaga kala qaybsan yahay. (2 Taariikhdii 16: 9). Aynu sidoo kale eegno kitaabka Maahmaahyada: "Rabbiga hortiisa indhihiisu waxay leeyihiin jid kasta oo jira, Oo jidadkiisa oo dhanna wuu wada fiiriyaa." (Maahmaahyadii 5:21) "Rabbiga indhihiisu meel kastay jiraan, Iyagoo fiirinaya xumaanta iyo samaanta" (Maahmaahyadii 15: 3). Qofna ma baxsan karo indhaha Rabbiga!
Ilaah waa indheheheenna dhisay. Waqti kasta iyo ka dib indhahayagu waxay u baahan yihiin inuu baaraan takhtarka indhaha si loo helo aragti wanaagsan. Ilaah baa mahad leh oo ina siiyay indho-indheyn si aan u aragno abuurkiisa cajiibka ah ee nagu xeeran. Aynu Ilaah ugu mahadnaqno wax badan oo ah furitaanka indhahayaga ruuxiga ah si aan u fahamno runta kiisa weyn. Ruuxa xigmadda iyo muujinta waxaan ku aragnaa rajada Eebbe ina siiyay markuu noo yeedhay; Wuxuu leeyahay dhaxal hodan ah oo cajaa'ib leh oo leh dadkiisa quduuska ah (Efesos 1:17 - 18).
Haddii ay tahay inaad sugto in indhahaagu baaraan, ka fikir mucjisooyinka araggaaga. Indhahaaga xir si aadan wax u arkin. Markaa indhahaaga fur oo eeg waxyaalaha kugu xeeran. Mucjisooyinka kadib mucjisooyinka, "isla markiiba, isla markiiba, oo leh buunka ugu dambeeya, maxaa yeelay waxay buunbuunin doontaa, oo kuwii dhintayna waa la sara kicin doonaa, waana kuwo aan dhammaanaynin oo waa layna beddeli doonaa" (1 Korintos 15:52). Waxaan ku arki doonnaa Ciise sharaftiisa oo waxaynu noqon doonnaa isaga oo kale, waxaan ku arki doonnaa indhihiisa indhihiisa sidii uu runtii yahay (1 Yooxanaa 3: 1-3). Ku mahadnaqa Ilaaha Qaadirka ah oo mahadnaq dhammaan shuqulladiisa yaabka badan.
Aabbihii jannada, waad ku mahadsan tahay abuuritaankaada aad u fiican oo cajaa'ib leh. Maalin maalmaha ka mid ah waan arki doonaa sida wiilkaaga Ciise Masiix runtiisu yahay. Tan ayaan idinku ammaanayaa magaca Badbaadiyeheenna Ciise. Aamiin
Waxaa qoray Natu Moti